COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-1-2021, 8:00 PM) COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-1-2021, 6:00 PM) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန “ယနေ့အတွက်ဓာတ်ပုံကဏ္ဍ (Photos of the Day)” (15-1-2021) COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-1-2021, 8:00 PM)
COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အသိပညာများ၊ သတင်း အချက်အလက်များ နှင့်
တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် အလိုက် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသခြင်း ဆိုင်ရာ
COVID-19 ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေး/အဖြေ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-1-2021, 8:00 PM)
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (15-1-2021, 6:00 PM)
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (14-1-2021, 8:00 PM)
ကျန်းမာရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာမူဘောင် (၂၀၂၀)
` ` N
Nationl Strategic Framework on Health and Drugs (2020)
ဒီနေ့အတွက် သိကောင်းစရာ (၆၄) (28-8-2020) - ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲရေရှည်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရနိုင်ပါသလဲ?
ဒီနေ့အတွက် သိကောင်းစရာ (၆၃) (20-8-2020) - သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါသလား?
ဒီနေ့အတွက် သိကောင်းစရာ (၆၂) (19-8-2020) - ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှုခံယူခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ?
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွား သေဆုံးမှုအခြေအနေ (13-12-2020)
“ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေး/ အဖြေအစီအစဉ် (၁၂ ပတ်မြောက် အစီအစဉ်)” (၁၃-၁၂-၂၀၂၀)
ပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်လက်များ အမှတ်စဉ် (၂၁/ ၂၀၂၀ / ကျန်းမာရေးအခြေခံအဆောက်အဦများ) (8-9-2020)
ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာများနှင့် ထိတွေ့ ဆက်စပ်မှု ရှိခဲ့သူများ သိရှိစေရန် အချက်အလက်များ နှင့် သတင်းပေးပို့ရန်
Select Case Case 151 Case 150 Case 149 Case 148 Case 147 Case 146 Case 145 Case 144 Case 143 Case 142 Case 141 Case 140 Case 139 Case 138 Case 137 Case 136 Case 135 Case 134 Case 133 Case 132 Case 131 Case 130 Case 129 Case 128 Case 127 Case 126 Case 125 Case 124 Case 123 Case 122 Case 121 Case 120 Case 119 Case 118 Case 117 Case 116 Case 115 Case 114 Case 113 Case 112 Case 111 Case 110 Case 109 Case 108 Case 107 Case 106 Case 105 Case 104 Case 103 Case 102 Case 101 Case 100 Case 99 Case 98 Case 97 Case 96 Case 95 Case 94 Case 93 Case 92 Case 91 Case 90 Case 89 Case 88 Case 87 Case 86 Case 85 Case 84 Case 83 Case 82 Case 81 Case 80 Case 79 Case 78 Case 77 Case 76 Case 75 Case 74 Case 73 Case 72 Case 71 Case 69, 70 Case 65, 66, 67, 68 Case 64 Case 63 Case 62 Case 61 Case 60 Case 59 Case 58 Case 57 Case 56 Case 55 Case 54 Case 53 Case 52 Case 51 Case 50 Case 49 Case 48 Case 47 Case 46 Case 45 Case 44 Case 43 Case 42 Case 41 Case 40 Case 39 Case 38 Case 37 Case 36 Case 35 Case 34 Case 33 Case 32 Case 31 Case 30 Case 29 Case 28 Case 27 Case 26 Case 25 Case 24 Case 23 Case 22 Case 21 Case 17, 18, 19, 20 Case 16 Case 15 Case 14 Cases 11, 12, 13 Case 10 Case9Case 8 Case7Case6Case5Case4Case3Case2Case 1
Newsletter (Vol. 5, No. 1)
JAN 2020 Download View